Lan-umhloli - ithuluzi yakhelwe ukuhlola ubuqotho ezokuxhumana amanethiwekhi. Ngokuvamile, thuluzi yakhiwa main okuyingxenye kanye detachable (ngokuvamile eyodwa, kodwa kukhona onobuhle lapho sebuningini izingxenye esikhiphekayo inikezwa). Lan-umhloli ivumela "prozvanivat" inethiwekhi yekhompyutha, ukuxhumana ngocingo, kokucindezelwa izixhumi.
Uxhumano Tester kusiza kakhulu umsebenzi futhi konga isikhathi Ochwepheshe ikhebula opharetha. Phela, umsebenzi wabo akuyona kuphela ukuba axoxe nezokuxhumana, kodwa futhi ukuze lungisa lonke uhlelo. Ngokubukeka, kuba cishe akunakwenzeka ukuthola ukuthi ikhwalithi isixhumi crimp, futhi indandatho yayo iphuma nabo umhloli, kuzothatha isikhathi esiningi futhi umsizi. Thuthukisa pair ezisontekile akuyona egumbini elilodwa njalo, ngokuvamile kube semikhawulweni ikhebula kukhona ezinhlangothini ezahlukene isakhiwo kanye on emabhilidini ezahlukene, futhi "embili" kulokhu a multimeter kungaba kuyahlupha futhi ungakhululekile. Kulapho singene usizo Ukugunda of idivayisi ezifana Lan-umhloli.
Ngoba "embili" cindezela nezixhumi both qeda of umbhangqwana elisontiwe. Ifaka komunye umkhawulo umzimba omkhulu isixhumi umhloli, kanti eyesibili - a esikhiphekayo isixhumi ingxenye. Ngemva kwalokho, thina uvule idivayisi iphinde uyisebenzise kumodi yokuhlola. Ngenxa isibonisi LED, Lan-umhloli ukunquma hhayi kuphela khona amakhefu ka ezisontekile pair izintambo futhi isekhethi, kodwa futhi ukuthola izintambo obuntofontofo.
Isikhathi esining impela, Wabasaqalayo ukunganakwa ukuhlolwa crimp izixhumi. Qala "prozvanivat" kuphela uma inethiwekhi computer akusebenzi. Nokho, lokhu yokuhlola kumele kwenziwe ngamunye crimp isixhumi ukuqinisekisa ukunemba nobuqotho ukuxhumana izikhonkwane isixhumi, hhayi nje kuphela lezo okwamanje lisetshenziswa inethiwekhi yekhompyutha. Uma kungenjalo ngeke uze ukwazi ukuvimbela amaphutha esikhathini esizayo futhi uhlelo izingozi.
Kukhona ukhetho olukhulu inethiwekhi abahloli, kokubili amateur nezobuchwepheshe. Ngamafuphi, Ngithanda ukuchaza izinzuzo zikagesi okhokhelwayo.
Amadivayisi anjalo zingase zivivinye ukuthi hhayi kuphela ezisontekile-pair, kodwa futhi ucingo izintambo coaxial. Usizo lwabenza imisenenzi lan-umhloli (ikhebula) ngaphandle kokuhlolwa okujwayelekile ezichazwe ngenhla kungaba ukukala ubude, ukukhipha amasignali ethoni, futhi babike lapho kuba khona babashayeli asebenzayo. Amadivayisi anjalo kufanele ephezulu grade ukubonisa, elibonisa lonke ulwazi oludingekile esimweni ikhebula. Futhi okubaluleke kakhulu, lezi amadivaysi babe inqwaba amamojuli akude. Ngokwesibonelo, lapho edonsa samakhebula ngokusebenzisa kabelgony "sokuxhumana" babhekana nenkinga ukuhlonza "siqu" ikhebula. Isithombe ngalokhu: isihlangu yokunamathela imikhawulo ngazimbili ezisontekile 10-15, futhi akunakwenzeka ukuba baqonde ukuthi yiliphi "owakho".
"Ukuqhubeka" amateur umhloli Ungahudula ku isikhathi eside, ikakhulukazi uma ezinye kuphele kolunye uhlangothi isakhiwo. Ngo ezinjalo esimweni kuzosiza amamojuli akude idivayisi okhokhelwayo. Ungabeka ku ekupheleni module ngamunye, futhi bona ekupheleni ikhebula yesibili esebenzisa main iyunithi umhloli ukubala wire edingekayo.
Kufinyeta, sithi Lan-Tester kumelwe for abantu Ngokuvamile Ukwethula pair ezisontekile ukuze inhlangano noxhumo lenethiwekhi ye computer.
Sibutsetelo umshini wokuwasha Indesit WISL 102
Ukubhodla - indlela yokugwema kuso?